IPowerCivil yeLatin America, umbono wokuqala -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/PowerCivil kwiLatin America, okokuqala ngqondweni
Ndibe sele ndifake le nto yokudlala, endiyithethile kuwe izolo, ndithetha ngeV8i 8.11.06.27 version.
Ekuqaleni, iphaneli iphakanyiswa apho yonke imisebenzi igxile khona. Ezantsi ziithebhu:
Nangona ezi zihamba, unokunciphisa iphaneli lasekhohlo, kunye neqhosha elifanelekileyo kwindawo leyo ungayitshintsha ithebhu.
Ngamnye wabo unemenyu yenkcazelo kwipaneli ekhohlo, njengalowo ndibonayo kumfanekiso kunye nepaneli yokunene inomfanekiso wezinto ezikhethiweyo.
Ngoko, umzekelo ubonisa ukuba ndikho kwi-tab yendawo, kunye ukhetho lomhlaba obizwa ngokuba yiNkoqobo, kwaye kunene kukho izinto ezinjengeenombolo zamaphuzu, i-triangles, i-breaklines, njl njl.
Kwimenyu ephezulu imiyalelo yomsebenzi ibonakala njengomzekelo oboniswe kwiiNkunkuma, apho kukho ukhetho, ukudala idatha, ukuhlela, ukubala, njl njl. Njll.
Iphaneli ayisiyonto intsha, efanayo nee-InRoads, kodwa ngoncedo loxinzelelo lweendlela zobunjineli. Kwaye oku kuhle kakhulu ukuze ungalahlekisi abasebenzisi beenkqubo zangaphambili kulo mgca weBentley.
Ngokubanzi, xa kuthelekiswa nokusabalalisa Geopakkunye i flavour I-InRoads, ndicinga ukuba kulungile kakhulu, kusekho imfuneko ukubonisa ukuba konke kukho.
Njengoko benditshilo kwisithuba sangaphambili: IPowerCivil: Kukui-InRoads ezinamaqonga, umjelo wamanzi, ubume bendawo, iMicroStation kunye neSpanish.
Ndizamile ukwenza ulwazi nge-AutoDesk Civil 3D, kwaye zizinto ezahluke kakhulu ngokwemenu.
Ngaloo ndlela, i-eyelashes Prospector y izicwangciso Ukwahlula ulawulo lweemodeli.
Zonke ezinye ziyafana, kwaye zeziphi iinkqubo ezikwenzayo kubonakala ngathi ziyafana. Ndicinga ukuba kuluncedo olukhulu ukuba ipaneli ye-3D ye-Civil ingaxhonywa kwiziphelo, ngelixa iphaneli yePowerCivil ijikeleza, nangona zozibini zinokuhlengahlengiswa ngokobungakanani. Iphaneli yasekhohlo yePowerCivil inokuvalelwa, ishiye ukusebenza okufanelekileyo kokubeka zombini windows kwiindawo apho zingaphantsi khona.
Sele sidlala siya kubona indlela yokwenza ngayo i-PowerCivil ukuzivocavoca yamanqanaba omgangatho kunye nokulungelelanisa esiye savelisa iintsuku ezimbalwa ezedlulileyo.
Ukusombulula ingxaki yeencwadi zokuthengisa
Ukususela ekuqaleni ndafumana iphutha eliqhelekileyo eliqhelekileyo:
Iphutha ekulayisheni ilayibrari yezakhiwo zeLOCALE, gpkSiteString.drx
Oku kulula ukuyisombulula - nditsho lula, kuba kulula nje skypearle kumhlobo - ukongeza ilayibrari ye-InRoads endleleni:
C: Iifayile zeProgram BentleyPowerCivilInRoadsGroupbin apho ubuncinci ii-1033 kunye ne-3082 ifolda kufuneka zibe khona, naziphi na ezimbini ezingekho, zonke iifayile zenziwe kwaye zikopishwa kule folda.
Ngaloo nto isonjululwe, kwimeko yam kukuba iifolda enegama elithi 1034, ndingaziqamba kabusha kodwa ndakhetha ukuya khona.
Le yile ngqungquthela eyabelwe ukuba isebenze kwizixhobo eziqulunqiweyo zeenguqulelo ixesha lokuqalisa. Kwimeko ye-PowerCivil, injalo, kuba ibaleka ngokungathi sisithethe se-InRoads, ephuhliswe kwi-Microstation VBA.
Ukuqukumbela, kubonakala kum kulungelelwaniso olulungileyo kunye noxinzelelo lwento esebenzayo ye-InRoads kunye neGeopak. Kodwa ukuba isebenza ngendlela esengqiqweni yophuhliso lweprojekthi, siza kubona.
Ndiyaqonda ukuba ezi nguqulelo zeelayisenisi sele zilungiselelwe umongo. Oko kukuthi, ukuba uthengela enye ye-Civil for USA, ayiyi kuzisa i-Civil for Latin America.
JORGE REYES uthi:
Ngaba ndinesiNgesi, ndingayifumanisa njani kwaye ndiyilungiselele eLatin America okanye eColombia?
bunos dias Ndingathanda ukufumana inkqubo umntu ondibanceda ngeposi crisdark4ever1@gmail.com enkosi….
Umele uqhagamshelane nomthengisi waseBentley osondeleyo eSpeyin, Mexico, Colombia okanye eSpeyin.
UJoseph Ponce uthi:
Ndingumsebenzisi we-Civil 3D, kwaye ndifuna ukuzama i-Powercivil, unokundixelela ukuba ndingayilanda njani. Unokundinceda ukuba ndiyifumane kwaye yintoni efunekayo ukuyilayisha.
douglas menjivar uthi: